उत्पादन मा मानव सुरक्षा लागि आपतकालीन वर्षा (एडीए) पूरा। तिनीहरूले एक पारंपरिक शवर समान छन्, तर आफ्नो मुख्य विशेषता - तत्काल, उच्च दबाव पानी आपूर्ति, अधिकतम कर्मचारीहरु लागि सुविधा। यो एक पेशेवर स्थापना, घर प्रयोगको लागि अभिप्रेरित छन् जो छैन। तिनीहरूले पारंपरिक वर्षा बाह्य उपकरण आकार र लागत फरक।
आपतकालीन शवर - यो आपतकालीन eyewash र शरीर को एक प्रभावकारी प्रणाली, ठूलो उद्यम र रासायनिक प्रयोगशालाहरुमा लागि डिजाइन गरिएको छ। यो बिन्दु आँखा लागि आपतकालीन वर्षा गरौं मा, शरीर, संयुक्त स्थापना, चिसो-प्रतिरोधी, अतिरिक्त ताप, फोहराहरू संग। एडीए - सिकार गर्न पहिलो सहायता प्रदान गर्दछ जो सामूहिक सुरक्षा, को माध्यम। चाँडै मदत संग ध्यान दिएर तिनीहरूलाई धुने, छाला र श्लेम लाग्एको झिल्ली गर्न कठोर रसायन हटाउन।
टिकाऊ सामाग्री को नरक बनाउन। अक्सर यो इस्पात जस्ती छ। मानक सरल सुरक्षा शवर यस्तो पर्खाल रूपमा ठाडो सतह संलग्न छ। यो एक हात लीवर संग सुसज्जित छ। थप जटिल र व्यावसायिक स्थापना भएको विकिरण सुरक्षित जुन केबिन धुलाई, रूपमा डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ।
आपतकालीन आँखा शवर
विशेष ROV, आफ्नो उद्देश्य आधारमा सबैभन्दा कठिन परिस्थिति र अवस्थामा मदत गर्न। आँखा लागि आपतकालीन शवर - स्थापना, विशेष हात-पेडल सक्रियता र मिक्सर सुसज्जित छ जो। आपतकालीन सिकार पछि पेडल सुरक्षा शवर प्रेस अनिवार्य छ। त्यसो गर्न चाँडै, अधिक ROV अधिकतम अलग परेलिहरु स्थापना गर्न, मोड्नु चलाउन आफ्नो हात राखेर र सुरु पेडल थिच्नुहोस्।
मिक्सर यन्त्र - थर्मास्टाटिक। यो तातो र चिसो पानी घोला जान सक्छ र शवर रू। अग्रिम सहज तापमान मा स्थापना गरिनु पर्दछ। यो चिसो पानी संग आँखा धुन सिफारिस छैन!
खतरनाक व्यवसायहरुको मा आपतकालीन शरीर शवर लागि सम्भव खतरनाक स्थानहरूको पैदल दूरी हुनुपर्छ। परिसर उद्यमी स्थित कसरी आधारमा, यो एडीए शरीर, छत वा तल्ला लागि पर्खाल गर्न माउन्ट छ। केही समय घाइते व्यक्ति विशेष दबाब आपूर्ति छ जो पानी संग छाला flushes। आपतकालीन शवर को ग्रहण न्यूनतम समय - पन्ध्र बीस मिनेट। फ्लस आँखा र शरीर को लागि आपतकालीन शवर सामना सुरक्षा कारण निषेधित छ।
संयुक्त आपतकालीन शवर स्थापना
आपतकालीन शरीर शवर र आँखा संयुक्त भनिन्छ। यो उपकरण गरम गर्न सकिन्छ देखि, कुनै पनि हावा तापमान संग उत्पादन हल मा स्थापित छ कि एक विशेष उपकरण हो।
संयुक्त ROV आँखा र शरीर, डिस्चार्ज, स्वचालित र मार्गदर्शन शवर-टाउको, एक खुट्टा प्लेट र लीवर सक्रियता, रोशनी, एक सुरक्षा फ्रेम, शवर, प्रकाश र ध्वनि थर्मास्टाटिक मिक्सर संकेत लागि छुट्टी खुलने लागि फोहरा र नलिका प्रदान। एक चिसो जलवायु संग रूसी क्षेत्रहरु लागि गर्म आपतकालीन शवर कम्बो। भित्र शवर गोठ हावा हीटर थर्मोस्टेट स्थापित। यो सानो घर पृथक छ, त्यसैले यसलाई गर्मी पनि कायम रहन्छ। गरम एडीए (तिनीहरूले आवश्यक भएमा बन्द छन्) प्लास्टिक Windows भनेर सिकार स्थिति अनुगमन गर्न अनुमति छ। स्वचालित ढोका बूथ प्रवेश पछि र यो बाहिर सक्रिय छन्। भौतिक सुरक्षा शवर - जस्ती इस्पात। यो उपलब्ध छ, र अन्य तत्व।
को एडीए कहाँ प्रयोग गर्ने?
आपतकालीन उद्योग र कहाँ रसायन, एसिड, alkalis संग काम, बाहिर प्रयोग गरे छ प्रयोगशालाहरुमा प्रयोग शवर। यस्तो उद्यम मा संभावना emergencies। तिनीहरूले मानव स्वास्थ्य हानी सक्ने खतरनाक पदार्थ को रिलीज संग सम्बन्धित छन्।
यस मामला मा, सुरक्षा को प्रभावकारी माध्यम आपतकालीन वर्षा हो। तिनीहरूले शरीर, खुला mucosal हानिकारक पदार्थ हटाइएको गर्न सकिन्छ। त्यसैले शरीरमा रसायन को नकारात्मक प्रभाव को likelihood कम तत्काल शवर प्रेरित। अलार्म सेटिङ पनि आगो कम्पनीहरु को लुगा काम गर्ने एक उच्च सम्भावना लागू छन्।
निर्माता आपतकालीन वर्षा
आपतकालीन शवर Haws - तत्काल सफाई को आधुनिक र प्रभावकारी प्रणाली, उद्योग र प्रयोगशाला अवस्था लागि डिजाइन। प्रयोग गर्न सबैभन्दा सुविधाजनक हो कि प्रणाली को यो निर्माता को peculiarity। तिनीहरूले यसलाई तेर्सो स्थिति छैन पनि भने, एक व्यक्ति सहयोग गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो कारण लम्बी ट्यूब, सारा शरीर को लागि प्रयोग गरिन्छ जो कन्फिगरेसन मा उपस्थिति गर्न सम्भव छ। को ADU Haws को सुरु मा स्वचालित र मुक्त हात छ। विशेष रबर कफ प्रदान आँखा सुरक्षा शवर लागि मोडेल। तिनीहरूले यांत्रिक क्षति देखि मानव को अंगहरु सुरक्षा। Handshower धूलो र माटो विशेष डिस्पोजेबल अक्षर बाट सुरक्षित। तिनीहरूले एक्लै प्रयोग (गर्दा बन्द पानी बन्द) पछि हटाइनेछ। घटक ROV पनि अलार्म प्रणाली, को शवर नजिकै स्थित छ जो को प्रतीक संग लेबल हुन्छन्।
आपतकालीन शवर Ist - यो टर्की उपकरण र खतरनाक सुविधाहरु, स्वास्थ्य हेरविचार कार्यकर्ता, पहिलो सहायता मा सुरक्षा र सुरक्षा को लागि प्रणाली। नरक Ist युरोपेली गुणस्तर स्तर अनुसार गरे। आपतकालीन वर्षा खुला श्लेम लाग्एको झिल्ली र छाला मा हानिकारक प्रभाव को रोकथाम, जब आवश्यक प्रदान गर्नुहोस्। प्रतिष्ठान analogues ROV विदेशी निर्माताहरु छन्। उपकरणको सुविधाहरू तिनीहरूले निरन्तर पानी जडान भएका छन् भन्ने तथ्यलाई मा निहित छ, र वाल्व को सुरु मा खुल्छ र सही दिशा मा दबाव अन्तर्गत तरल पदार्थ स्प्रे। आपतकालीन वर्षा विरूपण र जंग विरुद्ध सुरक्षित र त्यसैले लामो समय टिक्न।
आपतकालीन वर्षा त्यहाँ यस्तो एसिड र alkalis रूपमा मानव छाला संक्षारक पदार्थ गर्न जोखिम को एक उच्च जोखिम छ जहाँ सबै संभावित हानिकारक औद्योगिक बिरुवाहरु मा स्थापना गरिनु पर्दछ। खतरनाक स्थानहरू समावेश:
रसायन को भण्डारणको लागि गोदामों।
ढल उपचार बिरुवाहरु।
जो रूस को क्षेत्र मा सञ्चालन आपतकालीन वर्षा आवश्यकताहरु को normative र प्राविधिक दस्तावेज लिपिबद्ध, स्थापना गर्न। उदाहरणका लागि, तिनीहरूले सेनेटरी नियमहरु गर्न निश्चित छन् "रासायनिक हतियार विनाश, लागि स्थान, डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र रूपान्तरण सुविधाहरु लागि स्वच्छ आवश्यकताहरु भवनहरु र सुविधाहरु को पुनर्निर्माण र रासायनिक हतियार भण्डारण लागि सुविधाहरु को decommissioning।" आपतकालीन वर्षा पानी जोडिएको र कम्पनी कर्मचारी लागि सबैभन्दा सुविधाजनक स्थानमा रहन हुनुपर्छ। प्रयोग ADU सिकार आपतकालीन पछि सात पछि सेकेन्ड भन्दा हुँदैन।
स्वास्थ्य व्यवसायि, हानिकारक पदार्थ देखि छाला र श्लेम लाग्एको झिल्ली सफाई को प्रभावकारी विधि हेरचाह को कर्मचारी गरेको तरिका - खातामा खतरनाक उद्योग, आपतकालीन शवर को कर्मचारीहरु को बहुमत को विचार लिएर। समीक्षा द्वारा न्याय, को शवर साँच्चै आफ्नो उद्देश्य संग copes। यो एसिड र alkalis, बन्द तत्काल सक्रिय र, प्रयोग गर्न सजिलो को हानिकारक प्रभाव minimizes। यो प्रभावित कर्मचारी पहिलो सहायता प्रदान गर्न प्रभावकारी तरिका हो।
आँखा लागि आपतकालीन शवर प्रयोग गर्ने सबै, यो कसरी सजिला उपकरण महसुस। सामान्यतया, यो खतरनाक को उत्पादन गर्न अर्को सेट छ, त्यसैले आपतकालीन सहायता प्राप्त गर्न समय खर्च गर्न आवश्यक छैन। यो सजिलो संग उहाँले सिकार पनि सम्हाल्न र एक मानिस।
एक स्नान लागि माटोको टाइल विकल्प
"ट्राइटन" (स्नान): ग्राहक समीक्षा
Rossinka मिक्सर। भान्सा र बाथरूम लागि उत्पादनहरु को समीक्षा
छैन त महत्त्वपूर्ण छ - कति एक चिनचिला छ। मुख्य कुरा यो एक खुशी छ कि छ
Kira: मान। अनुकूलन व्यक्तित्व नाम
Preslav होटल3* (स्वर्ण बालुवा, बुल्गेरिया): समीक्षा, वर्णन र समीक्षा
चिया लागि घर केक: क्रिम चिज संग scones
अभिनेताहरु, वर्ण, दर्शक समीक्षा: जो फिलिम "Whisper" प्ले
गैस्ट्रो रोग: लक्षण, उपचार र रोकथाम
अस्थायी दर्ता: कसरी गर्ने? अस्थायी दर्ता: रूसी संघको कानुन
को आविष्कार को इतिहास र गुण: जो पपकर्न आविष्कार
5 चरण बाबु आमा नेता मा